नैतिक र धार्मिक तर्क
समलैंगिक विवाहको बहसमा, विरोधीहरूले धेरै तर्कहरू छन् कि उनीहरूको विश्वासलाई विश्वास गर्छन् कि यो कानूनी हुँदैन। यसमा धेरै नैतिक र धार्मिक कारणहरू छन् जुन विवाहको पवित्र संस्थालाई खतरामा राख्छन्। यद्यपि, के विवाह हो एक धार्मिक रात्रि वा एक नागरिक अधिकार ?
यो छलफलले धेरै प्रश्नहरू ल्याउँछ। मुद्दा बुझ्न कोसिसमा, चलो समान-विवाहको विवाह विरुद्ध सामान्य तर्कहरू गरौं र किन उनी आधुनिक अमेरिकामा खडा हुन सक्दैनन्।
के विवाहको बिन्दु हो, समलैंगिक वा सीधा?
त्यहाँ एउटी यौन जोडी विवाहित हुनुको पनि बिन्दु हो? तिनीहरू किन परेशान गर्न चाहन्छन्? विवाह वा पुरुष र स्त्री वा एउटै सेक्सको दुई जना व्यक्तिको बीच हो, विवाहित हुनु पछिको कारण एउटै हो।
निस्सन्देह, विवाहित हुनुको कानुनी कानूनी, सम्पत्ति र वित्तीय लाभहरू छन्। यसमा अन्य साझेदार र घर वा अन्य सम्पत्तीको संयुक्त स्वामित्वको लागि मेडिकल निर्णयहरू बनाउन एक साझेदारको दावी छ। विवाहित जोडीहरू बैंकिंगबाट कर, संयुक्त रूपमा।
मौलिकता, विवाहको बिन्दु - हामी समलैंगिक समलैंगिक वा सिधा-परिवारलाई सुरू गर्न चाहन्छौं। यसमा बच्चाहरू समावेश वा आफ्नै जोडीमा हुनसक्छ। कुनै पनि तरिका, एक विवाह प्रमाणपत्र परिवार एकाइ को आधार हो र यो धेरै मान्छे को लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ।
पुरुष र एक महिलाबीच विवाह के हो?
विवाह समानताका विरोधीहरूले सामान्यतया जोड राख्छिन् कि विवाह मात्र एक महिला र एक महिलाबीच हो जब वैवाहिक मात्र वैध छ।
त्यो कहाँ मान्छेहरूलाई छोड्ने पुरुषहरू या पुरुष वा महिला होइन - कम से कम परिभाषा अनुसार अनुसार सामान्य रूपमा रोजगारी गरिन्छ?
सेक्सको सन्दर्भमा विवादास्पद विवाहलाई हामी कसरी पहिलो स्थानमा एक व्यक्तिको सेक्स परिभाषित गर्छ भन्ने प्रश्न सोध्छ। एक "मानिस" के हो र एक "महिला" के हो? सख्त शब्दावली प्रयोग गर्दै, त्यहाँ मानिसहरू जसको लागि कसैलाई विवाह गर्न स्थायी रूपमा अस्वीकार गर्न सकिन्छ।
विवाह: धार्मिक रात्रि वा नागरिक अधिकार?
समलैंगिक विवाहको हरेक प्रतिद्वंद्वीले विश्वासमा भरोसा राख्छ कि विवाह अनिवार्य रूपमा अनि अनिवार्य रुपमा एक धार्मिक रवैया हो। तिनीहरूका लागि, विवाह विशेष गरी धार्मिक नियमहरूमा अवस्थित छ। यसको मतलब समलैंगिक विवाहितले एक प्रजातिको रूपमा रूपान्तरण गर्दछ, राज्यको घुसपैठ एक धार्मिक विषयमा उल्लेख गर्दैन।
यो सत्य हो कि धर्मले परंपरागत रूपमा विवाहको पवित्र विवाह गर्ने भूमिका खेलेको छ। अन्तमा, यो विश्वास सरल छ। विवाह को सम्झौता दुई व्यक्ति, एकअर्काको हेरचाह गर्ने प्रतिज्ञा को बीच एक कम्पैक्ट पनि हो।
विवाह कहिल्यै एक मात्र धर्ममा निर्भर भएको छैन र यसको सट्टा मानव इच्छाको परिणाम हो जुन समुदायले पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दछ। यस कारणको लागि, विवाह धार्मिक धार्मिक भन्दा धेरै नागरिक नागरिक अधिकार हो ।
विवाह पवित्र र एक पवित्रता हो
विवाहसंगै धार्मिक धर्म हो भन्ने विचारसंग नजिकिएको यो धारणा भनेको विवाह हो पवित्र हो वा पवित्र संस्कार हो। यो तर्कले मात्र तुरुन्तै स्पष्ट बनाएको छ।
यो समलैंगिक विवादास्पदहरूको विरोधीहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मौलिक तर्क हो। यो लगभग आफ्नो सबै तर्कहरु को दिल मा झूठ लग रहेको छ।
यसले अन्यथा आफ्नो व्याख्या धेरै उत्प्रेरित गर्दछ जुन अन्यथा व्याख्या गर्न गाह्रो हुन्छ।
वास्तवमा, यदि यो विचारको लागि कि विवाह विवाह होईन, यो सम्भव छैन कि चलिरहेको छलफल बहस हुनेछ जस्तै यो।
विवाहको छोराछोरीको लागि विवाह हो
विचार कि समलैंगिक जोडीहरूले विवाह गर्न अनुमति नदिनुको कारण उनीहरूले भविष्यवाणी गर्न सक्दैनन् धेरै लोकप्रिय छ। एकै समयमा, यो सम्भवतः कमजोर र कम विश्वसनीय तर्क हो।
यदि विवाह गर्नुपर्ने उद्देश्यको लागि विवाह मात्र छ भने, कसरी बाख्राको जोडीलाई विवाह गर्न सकिन्छ? साधारण तथ्य यो तर्कले मानक प्रयोग गरी निर्भर गर्दछ जुन सिधा जोडीहरूमा लागू हुँदैन।
समलैंगिक विवाहले विवाहको संस्थालाई कमजोर बनाउनेछ
केहि नयाँ वा केहि परिवर्तन तर्क वा मूल्यवान संस्थालाई कमजोर पार्ने वा नष्ट हुनेछ लगभग अयोग्य छ।
यो आश्चर्यचकित छैन कि समलैंगिक विवाहका विरोधीहरूले प्रायजसो शिकायत गर्छन् कि यस्ता विवाहहरूले विवाहको संस्थालाई कमजोर बनाउनेछ।
विद्रोहीहरूको अनुसार, एकै यौन सम्बन्धका सदस्यहरूबीच विवाह एक आत्म-विरोधाभास हो, त्यसैले तिनीहरूका युनियनहरूलाई कुनै पनि विवाहले पनि हानि पुर्याउनेछ। बस सम्वन्धित समलैंगिक संघले कति क्षति पुर्याउन सक्छ? अनि कसरी?
समलैंगिक जोडेहरू अनौपचारिक र अप्राकृतिक युवतीहरू विवाह हुन सक्दैनन्
समलैंगिक विवाहको यो प्रतिबन्ध पनि उद्देश्य र निष्पक्ष हुन को लागी बहस गर्ने प्रयास गर्दैन। यो समरूपी र समलैंगिहरूको तिर मानिसहरूको एनिमस सिधा फोकस गर्दछ।
समलैंगिक सम्बन्धहरू स्पष्ट रूपमा असामान्य र अपरिपक्व रूपमा उपचार गरिन्छ । यो सजिलै निष्कर्षमा पुग्छ जुन रिश्तों को कुनै पनि प्रकारको कानुनी वा सामाजिक अवस्था दिइनेछ। सायद यो असल कुराको बारेमा मात्र एक राम्रो कुरा हो भन्न सकिन्छ कि यो सबैभन्दा सीधी इमानदार एक हो कि प्रतिद्वंद्वी बनाउन सम्भव छ।
समलैंगिक विवाह धार्मिक लिबर्टी संग असंगत छ
समयावधिहरूको लागि समान नागरिक अधिकारको विरोध धेरै पक्षमा आउँछ। जब सबै आर्गुमेन्ट कि समलैंगिक विवाह एक सामान्य खराब असफल हुन्छ, धार्मिक रूढ़िवादीहरूले तर्क लगाउन उत्प्रेरित गर्छन् कि यस्ता विवाहहरूले आफ्नै हक अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेछन्।
यो एक अप्ठ्यारो रणनीति हो किनभने कुनै पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको विरोधको रूपमा तिरस्कार गर्न चाहँदैनन्। तथापि, यस प्रकारका रूढिवादीहरू समेट्न असफल भएका छन् कि कसरी समानुपातिक समानुपातिक समानुपातिक समानुभूतिको व्यवहार गर्दछ र मानवहरू कसैको धार्मिक स्वतन्त्रता संग असंगत छ। धार्मिक अधिकारको संरक्षणले कहिलेकाहीं अल्प-वर्गका नागरिकहरूलाई अल्पसंख्यकहरूको उपचार गर्न आवश्यक छ?
समलैंगिक विवाह वैवाहिक विवाह हुन सक्दैन
समलैंगिक विवाहको विरुद्ध सबैभन्दा सरल साधन शब्दकोश शब्दकोश हेर्नको लागी हो। धेरै को खोज मा अद्भुत छ कि यो केवल पुरुष र महिलाहरु संग विवाह को बारे मा उल्लेख गर्न को लागि चुनन को लागि चुनते हो, तब साघ मा निष्कर्ष निकाल्छ कि समलैंगिक सम्भवतः विवाह गर्न सक्छन्।
यो दृष्टिकोणले यस तथ्यलाई बेवास्ता गर्छ कि विवाहको प्रकृति परिभाषामा परिवर्तन भएको छ र शताब्दीमा प्रायः श्रृंगार परिवर्तन भएको छ। विवाह अहिले सबै होइन जस्तो कि यो दुई लाख या यहाँ सम्म कि दुई शताब्दी पहिले नै होइन।
दिइएको विवाहको प्रकृतिमा कसरी व्यापक र मौलिक परिवर्तन भएको छ, के वास्तवमा रक्षा गर्ने प्रयास गर्ने परम्परागतहरू हुन् र किन? आधुनिक विवाहको बारेमा साँच्चै "परम्परागत" के हो?
सांस्कृतिक प्रतीकको रुपमा विवाह
अमेरिकामा समलैंगिक विवाहको वैधानीकरणमा बहस मात्र समलैंगिक जोडेहरूको अवस्था भन्दा अधिक छ। यो अमेरिकी नागरिक कानून को भविष्य को बारे मा पनि छ। या त नागरिक कानून नागरिकताको आवश्यकता र अधिकार द्वारा परिभाषित गरिएको छ र समलैंगिक विवाह वैधानिक हुनेछ, वा नागरिक कानुनले धार्मिक कानुनको शासनमा राखिनेछ र समलैंगिक विवाहलाई प्रतिबन्धित गरिनेछ।
समलैंगिक विवाहका विरोधीहरूले आफ्नो स्थितिको लागि कानुनी र सामाजिक कारण प्रस्ताव गर्न खोज्छन्। यद्यपि, यो सँधै धर्म र धर्ममा आधारित समयावधि समलैंगिक दिशामा आउछ। ईसाई राष्ट्रवादीहरूका लागि, वैधानिक समलैंगिक विवाहले अमेरिकी संस्कृति र कानूनको सीमा परिभाषित गर्न युद्धमा आफ्नो धर्मको लागि हारको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
समलैंगिक विवाहले अधिकृत अधिकार, पहिचान र शक्तिको मानदण्ड स्थापित गर्न खतरालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। ती अधिकारीहरू जसले अधिकार र शक्ति पाउँछन् र उनीहरूले आफ्नो पहिचानहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गरेका छन् जसलाई सम्भावित परिवर्तनहरूले धम्की दिन्छन्।
एउटा कुरा जुन प्रायः थुप्रै मानिसहरु सँगै छक्क परेको छ त्यहि धेरै धार्मिक र राजनैतिक रूढिवादीहरूको तर्क हो जुन समान विवाहले "धम्की" र "पारंपरिक विषमय विवाह" लाई "कमजोर पार्दछ।" समान साझेदारीको कानुनी कानुनको बारेमा पनि भनिएको छ जुन एउटै सेक्स पार्टनरले विवाहित युगलको एउटै आधारभूत अधिकारलाई पनि प्रदान गर्दछ।
यो किन हो? एक सम्बन्धले अरूलाई कसरी खतरामा पार्छ वा गम्भीर बनाउन सक्छ?
विवाह सिर्फ एक संस्था होइन, तर यौन, कामुकता र मानव सम्बन्धको बारेमा हाम्रो संस्कृतिको आदर्श प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतीक पनि हो। प्रतीकहरू महत्त्वपूर्ण छन्; तिनीहरू एक सामान्य सांस्कृतिक मुद्रा हुन् जुन हामी प्रत्येकको आफ्नै स्वभाव सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछौं। यसकारण, जब विवाहको परम्परागत प्रकृति कुनै पनि तरिकामा चुनौतीपूर्ण छ, त्यसकारण मानिसहरूका मूल परिचयहरू छन्।
विधायकहरू सोधेर "विवाहको रक्षा" गर्ने कार्यहरू पारित गरेर, मतदाताहरूलाई कानूनको प्रयोग गर्न विवाहको संस्थामा एक प्रतिलिपि अधिकार वा ट्रेडमार्कको सांस्कृतिक बराबर सिर्जना गर्न को लागी यो पनि धेरै चुनौतीपूर्ण हुनदेखि रोक्नको लागि प्रयोग गर्दछ।
ईसाई धर्म बनाम डेमोक्रेसी - ईसाई धर्म लोकतान्त्रिकसँग मेल खान्छ?
किन झण्डा झन् झन् झन्डा
एक 'नैनहेस्ट' र एक पाश्चात बीचको भिन्नता
व्यावहारिक सिद्धान्तको सत्य
कस्तो सोचाइ छ? - खुसी मनसाय
विज्ञान र वैज्ञानिक सिद्धान्तहरूको लागि मापदण्ड
पहिलो संशोधन र संघीयता
पहिलो क्रुडको समय-समय, 1099 -1100
अमेरिकी क्रांति: अर्नोल्ड अभियान
हङकी टोंक के हो?
फेरी टेल मंगा प्रोफाइल र कथा सारांश
जर्जियामा नि: शुल्क अनलाइन पब्लिक स्कूलहरू
संतहरु बाट एन्जिल उद्धरण
शीर्ष 20 वर्तनी एनमोनिक्स
पार्क विश्वविद्यालय प्रवेश
पक्षीहरूको बारेमा प्रेरणात्मक उद्धरण
डाउनलोड र बोलल्याण्ड C ++ कम्पाइलर 5.5 स्थापना गर्दै
उपस्थित वर्तमान शब्द
'ग्रेको एनाटोमी' सिजन2सारांश
स्व-दया र आत्म-अवशोषणको माथिल्लो 80 80 गीतहरू
10 कारणहरू जान जान्छ विलुप्त
जेडेम दास सीन - एक जर्मन प्रोभरब इतिहास को माध्यम ले बदल्यो
ईश्वर धर्मलाई धर्म छ?
परिभाषा र कवितामा कवितामा परिभाषा र उदाहरणहरू
कपर र पीतल क्लीनर कसरी गर्ने
1929पीजीए चैंपियन
बाइबलको प्रलोभनको परिभाषा के हो?
कक्षाको लागि फ्रान्सेली नम्बर अभ्यास मजा गर्नुहोस्